Maxaa Loo Diidaa In Aan Dood Adag La Siinin? | Martech Zone
Maxaa Loo Diidaa In Aan Dood Adag La Siinin?
Axad, Janaayo 20, 2008 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Waxaa jira ilmo cusub oo ku jira qaybta faallooyinka ganacsiga, Dood Adag. Ujeeddada adeeggu waa mid aad u fiican - soo bandhig bakhaar dhexe si loola socdo faallooyinka martidaada, ballaadhi faallooyinka ka baxsan balooggaaga, isla markaana bixi is-dhexgal aad u hodan ah si loo muujiyo faallooyinka.
Maaha wax muhiim ah laakiin wali dhibaato ayaa ah balanqaadka ka socda Doodda Adag ee ah inaad dhoofin karto faallooyinkaaga haddii aad go'aansato inaad waligaa ka tagto adeegga. Taasi waa kiniin adag oo la liqo… gaar ahaan haddii ay si fudud uga tagaan adeegooda oo ay xiraan goobta.
Tags: 2 qoraaadminqorayaasha boostadaNadiifintawada shaqeeyayaashagaadiidka tooska aheolsondhiirrigelin dhacdojaamarkaLiisaskaxayaysiinta dhacdo suuqgeyntaMichael StelznerSliderwada-qorayaasha wordpressqorayaasha wordpresswordpress qorayaal badan
Qalabka, Software… Webware?
Xiiso badan? Waa inaad noqotaa!
Jan 20, 2008 saacadu markay ahayd 9:21 PM
Waa nooc ka mid ah fikradaha xiisaha leh… u gacan gelinta faallooyinkaaga barta adeeg kale. Waxay u badan tahay inuu ka caawin doono arrimaha spam. Waxay iga dhigeysaa inaan la yaabanahay waxa kale ee aad u suurtagasho "ka baxsan" gudaha balooggaaga (iyo dhinaca gadaal, nooca noocyada adeegyada blog ee cusub ee la bixin karo).
Taariikhdooda taraafikada Alexa waxay muujineysaa lamaane waaweyn oo waaweyn. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la arko haddii adeeggu uu ku kori karo oo uu la tacaali karo baahida sii kordheysa. Sida adeegyo badan oo nooca aaladda loo yaqaan 'widget' ah, haddii ay si dhakhso leh u koraan oo ay xamili waayaan culeyska, waxay u sababaan dhammaan baloogyadooda inay si gaabis ah u rartaan oo isticmaaleyaashu ay ka boodi karaan markabka.
Jul 21, 2008 markay tahay 5:36 PM
Nabade Douglas. Waad ku mahadsantahay dhajinta ku saabsan IntenseDebate. Waxaan jeclaan lahaa inaan wax ka qabto dhowr waxyaalood oo aad ka welwelsan tihiin. IntenseDebate waxay bixisaa dhoofinta WordPress oo faallooyinkaaga si toos ah ugu celisa nidaamka faallooyinka lahaanshaha ee WordPress.
Marka la eego gelinta faallooyinka lagu sameeyay IntenseDebate si toos ah faallooyinkaaga WordPress ee keyd ahaan, faallooyin tixraac ah, iyo API-gaaga (faallooyinka Nuux ee kor ku xusan), waxaan haynaa astaamo waaweyn oo waaweyn oo khadka soo socda wax yar ka dib! Weli kuma daadin karo digirta si cad (in kastoo aan qiyaasayo inaan sameeyay), laakiin aan dhahno liiskaaga aad rabto oo dhan ayaa lagu dabooli doonaa tan oo ah astaamo kale oo cabsi leh.
Waxaan raadineynaa tijaabiyayaal beta ah nooca soo socda ee WordPress ah nooca soo socda ee 2.0. Haddii aad xiiseyneyso inaad waxbadan ka ogaato astaamaha cajiibka ah ee ku jira tan oo aad gashid liiska beta fadlan iigu soo dir emailka taageero@intensedebate.com. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku isticmaalo IntenseDebate.